Ji’oota 8 booda iccitii tokko ummata Oromooti himuuf murteesse Jira. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsJi’oota 8 booda iccitii tokko ummata Oromooti himuuf murteesse Jira.
Ji’oota 8 booda iccitii tokko ummata Oromooti himuuf murteesse Jira.
“Yoo waan tokko dubbatte Hacaaluu Hundeessaattin si dabala” Dirree xiyyaaraa Booletti akkas naan jedhan.
Erga mana hidhaatii baheen booda waan baayyee dabarse. Lubbuun jiraadhee Miidiyaatti mul’achuun kiyya namoota baayyeef ajaa’iba ta’uu namoonni hedduun erga OMN’tti deebi’uu kiyyaa baranii booda boo’aa natti himaa turan. Isaan keessaa sadeen tokko hardha isinittin hima.ammas Sodaa nageenyaa qabaachuun kiyya ifa kanaaf Eegumsaa cimaa ummata Oromoo irraa barbaada garuu Addunyaan hunda dhimmaa koo waan beektuf osoo na ijeessanilee dhimmaa irra hin qabu. Mana hidhaati eegii baheen booda naannoo ji’oota 4f under house arrest (Mana keessati hidhama ture).Lubbuu tiyyaaf sodaadhe biyyaa bahuuf jeenan waan bayyee narratti hojaatan.Ammaaf 3 qofa irra dubbadha.
1.Qaamoleen nageenyaa mootummaa (security intelligence) yeroo 3 ol dirree xuyyuura Boolee irraa na deebisuun imala ani Dubaayii fi Keeniyaa dabalatee bakka biraatti godhuuf ture na jalaa haqan. Sa’aatii hedduuf Airport keessatti hidhamee bahe. Meeshaan kiyya yeroo lamaa ol biyya biraatti ergamuun na darararan. Marsaa 3ffaaf akka ani hin deemnef fake Coronovirus Certificate naaf kennanii within hours difference (garaagaruma sa’aatii muraasaa keessatti) Hospitaala Akka Waashingtan fa’itti ilaalamee ragaan isaan naaf keenani soba ta’uu bare(ragalee laman Maxxanse jira .Ka isaani positive nan jedhani dhiyootu maxxansa wal bira qaba ilaala).Marsaa 3ffaaf deebi’ee dhufnaan “Hacaaluutti si daballa” naan jedhani.
2:Erga Gaaffiif deebii Aljaziiraa English waliin godheen booda duulati naatti baayyate. Qaamolee nageenyaa Mootummaa na hordofuun konkoolaataan Ani keessa ture erga rukutaniin booda Hancufa fuulatti na tufuun arrabsoo garaagaraa naan jedhanii,natti roorrisan.ta hafte gaafa bari darbe dubbadha!
3.Ragaa kiyyaa kan Yunivarsiitii Finfinneetti BA In political science and International relation itti baaradhe na dhowwatan. Digrii koo kan jalqabaa Yunivarsiitii maqalee irraa,Maastarsii kiyyaa immoo Yunivarsiitii Finfinnee irraa Gaazexeessummaa qaba ture. Dabalataan Digrii biraa(3ffaa jechu) Yunivarsiitii Finfinneetti political science barachaa turus ragaa kiyya akka hin fudhanne na dhowwuun, digriif Mastersii koo isa gazeexeessummaa laman qabadhee keessaa baqadhe.
Lubbuu tiyyaaf waan sodaadheef Karaa Daangaatiin (border) qaxxaamuree biyyaa bahuuf dirqame. Akka ani lubbuun jiraadhee hardha gahuuf warra haala mijeessani biyyaa naa baasan hunda baayyee galatoomfadha.
Jaarmiyaan Mirga Gaazexeessitootaa :Committee to Protect Journalists(CPJn)qarshii biyya bahuun (re -allocation money) kuma 100 ol naaf arjoommee,Oromia Media Network(OMN)hanga dhumatti ciichee waan hedduu naaf ta’e ,qondaaltooti Mottummaa ollaa keenya keessumati namooni ani gaafa bira galata galchuuf olmaa jabaa barii hin jijjire naaf oolan.
SEENA JIREENYA KIYYAA IRRATI BOLDYL MAQAA ISAANI BAREESSE JIRA
-Garee mirgaa Gazeexesitoota
-Miidiyalee Addunyaa kaneenn akk Al Al Jazeera English
-Warra Mirgaa namoommaf
-poolisii idil Addunyaa interpool warra biyyaa kana waaliin ta’uun sirriti quba na qabu.
Ta hafte gaafa barii darbe dubbadha.Ragalee maxxanse ilaalu dandeettu.
Namni rabbiin jiru garuu wal irra hin jiru jedhumiti ree
Via: Ajaahib Jimaa Tooboo
Sudan Mulling Int’l Arbitration in Dispute with Ethiopia Over GERD
PPn Yeroo filannoo dheereffate. Miliyoona 18 qoofatuu galmaaye, kunis lakkoofsa caasaa paartii siyaasa PP qofa kan hincaalledha!